Taliyaha bileyska gobolka Bari oo ka hadlay dilkii xalay ka dhacay Bossaso iyo kuwii ka horreeyey. – Radio Daljir
Taliyaha bileyska gobolka Bari oo ka hadlay dilkii xalay ka dhacay Bossaso iyo kuwii ka horreeyey.
Abriil 25, 2011 12:00 b 0
Bossaso April, 25- Taliayaha Booliska gobolka Bari Siciid Jamac Haruun ayaa waraysi uu maanta (Isniin) siiyey idaacadda Daljir kaga hadlay dilalkii ka dhacay magaalada Bossaso oo uu ugu dambeeyey kii loo gaystay Allaha u naxariistee marxuun Siciid Cumar Xassan habeenkii xalay.
Siciid Jamac Haruun taliyaha qaybta bileyska wuxuu intaasi ku daray in dilalka ay fulinayaan manaxayaal cadaw ah ayna tahay mid aan la fiirsan, wuxuuna tilmaamay in ciidanka bileysku ay wadaan baaritaan la xiriira arrintaasi ayna natiijada u soo bandhigi doonaan saxaafadda.
Saraakiisha booliska ayaa mararka ay faldambiyeedyadu dhacaan badanaa isticmaala erayada waa baaraynaa, waa ku raadjoognaa iyo kuwa kale umana badna in dhacdada mar dambe la soo hadal qaado haddii lagu guulaysan waayo qabashada dambiilaha.
Muddooyinkii dambe waxaa magaalada Bossaso laga dareemayey hawl-gallo ay wadaan ciidanku siiba xilliga habeenkii ah, waxaana xaafadaha magaalada lagu arkaa ciidanka oo roondo sameynaya kuwaas oo ku qalabaysan hubka fudud iyo kawaarida ciidanka.
Mararka qaarna waxaa lagu arkaa xaafadaha ciidamada oo cagta maalaya una socda si raxa-raxan ah, balse taasi ma noqon mid baajisa dilalka qorshaysan ee lagu hayo dadka wax-galka ah.
Cuuke oo ay Garoowe ka galbiyeen wasiirro saddex ah, Gaalkacyana ay ku soo dhaweeyeen maamulkii hore iyo qaybaha bulshada.
Baahin: Axad, Apr 24, Weriye C/fitaax C. Geedi ~ Daljir ~ Galkacyo. Munaasabad lagu maamuusay barnaamijka tallaalka carruurta ee cudurada dilaaga ah oo lagu qabtay Garowe; M/weyne Faroole oo ammaanay waxqabadaka wasaarada caafimaadka … Gen. C/samad Cali Shire oo shir wada-tashi ah la yeeshay guddiga amniga ee Bossaso, kormeerayna madaarka iyo dekedda Bossaso … Xayiraad lagu soo rogay gaadiidka u safra degaanka Majarre ee gobolka Bari; odayaasha dhaqanka oo cabasha ka soo jeediyey arrintaas … Cawke, Gudd. cusub ee gobolka Mudug oo wareejiyey xilkii agaasime ee uu hore uga hayey wasaarada waxbarashada … Warbixin guud oo ku saabsan saamaynta abaaraha ee gobollada Puntland …